Ny fahazoana ilay Salvator Mundi an'i Da Vinci dia nahitana fanelanelanana tamin'ny geopolitika anisan'izany ny tranombakoka Vatikana
Home » Travel Associations News » Ny fahazoana ilay Salvator Mundi an'i Da Vinci dia nandray anjara tamin'ny fanelanelanana Geopolitical anisan'izany ny Museums Vatican
Ny fahazoana ilay Salvator Mundi an'i Da Vinci dia nandray anjara tamin'ny fanelanelanana Geopolitical anisan'izany ny Museums Vatican
Ny Salvator Mundi an'i Da Vinci any Louvre Abu Dhabi dia azo inoana fa vokatry ny fanelanelanana ara-jeopolitika, nahitana ny volan'ny fampiasam-bola Anglo-Saxon, firewall ara-bola ary Mohammad Bin Salman (ny printsin'ny satro-boninahitry ny Arabia Saodita), iza no tena nifehy ny vidiny farany naloany. Azo antoka fa azo antoka ho an'ny manodidina ny kanto 700 tapitrisa dolara.
In Jona 2017, Arabia Saodita sy ireo mpiara-dia aminy, anisan'izany ny Emirà Arabo Mitambatra, nanapaka ny fifandraisana diplomatika rehetra Qatar, izay tao anatin'ny taona vitsivitsy, dia nametraka ny tenany ho hery mitarika eo amin'ny tsenan'ny zava-kanto manerantany amin'ny alàlan'ny Qatar Museum Authority (Sheikh Hamad Bin Khalifa Al Thani).
Mandritra izany fotoana izany, mifanaraka amin'ny fanao mahazatra, ny tranombakoka Vatikana (12 ny fitambarany) dia nandalina betsaka ny Salvator Mundi fahafaha-manao ary indrindra ny fomba fandikana ny sary masina an'i Da Vinci's Christ.
Ny andiam-pifaneraserana misy ifandraisany amin'ny lohahevitr'ireo mahery fihetsika isan-karazany amin'ny varotra - samy mifanohitra amin'ilay teo aloha - dia manondro fa ny sary hosodoko dia mipoaka ara-teôlôjika, ary mazava fa, tamin'ny farany, ireo mahery fihetsika samy hafa dia nisafidy ny hisoroka ilay lohahevitra, raha dinihina ny "hafanana" teolojika mety hanimba ny fahombiazan'ny varotra.
The Salvator Mundi ny fandokoana koa dia mety hanafintohina ny fahatsapana saodiana: ny sarin'olombelona ary indrindra ny sarin'ireo olona ara-pivavahana dia voarara amin'ny alàlan'ny marika silamo hentitra amin'ny finoana silamo, ary ity dia manangana olana manokana satria maneho an'i Jesosy ho "Mpamonjy an'izao tontolo izao" (Dixit The New York Times).
Taloha, ny Museums Vatican dia nanana zo mazava foana handinika, hanamarina ary, raha ilaina, dia mahazo sary aman-kanto manan-tantara izay nitana andraikitra lehibe tamin'ny fampielezana ny finoana kristiana. Na dia nihena tsikelikely aza ity ampihimamba RC ity dia mbola manan-kery hatrany amin'ny taonjato faha-21 ho an'ny sanganasa kanto rehetra izay maneho ny tandindon'ny finoana kristiana; ary i Jesosy Kristy nolokoin'i Leonardo da Vinci amin'ny maha-Mpamonjy an'izao tontolo izao dia fanehoana iray toy izany.
Artprice dia afaka manamarina fa ny varotra «Salvator Mundi» an'ny Da Vinci » dia tena nahitana fanelanelanana geo-politika ary koa fitantanana diplomatika ny fifandraisana ara-pinoana sy teolojika. Ny vokatra farany, niaraka tamin'ny sary naseho tao amin'ny Louvre in Abu Dhabi, noho izany dia ny vokatr'ireo anton-javatra rehetra ireo sy ny sandan'ny fiantohana ny zava-kanton'ny at 700 tapitrisa dolara azo inoana fa mifanaraka tanteraka amin'ny lanjan'ilay sary hosodoko amin'ny sehatry ny Museum Industry ®.
Raha mila fanazavana fanampiny dia vakio ny a 7 Desambra 2017 famotsorana https://www.actusnews.com/fr/ARTPRICE/cp/2017/12/07/news-of-da-vinci_s-salvator-mundi-being-exhibited-at-the-abu-dhabi-louvre-and-soon-at-the-paris-louvre-entirely-endorses
Vaovaon'i Da Vinci's Salvator Mundi aseho ao amin'ny Abu Dhabi Louvre -ary tsy ho ela ao amin'ny Paris Louvre- manohana an'i Artprice tanteraka's Museum Industry®
Nanome fanazavana manokana momba ny fandaminana ara-bola be pitsiny ao ambadiky ny fahazoana vao haingana ny Leonardo Da Vinci's Salvator Mundi -fanazavana izay nalain'ny Agence France Presse androany-, Artprice dia nanasongadina maodely ara-toekarena tena avo lenta.
Ny fandaminana ny fahazoana ny sangan'asa Da Vinci dia mifanentana tanteraka amin'ny maodelin'ny Museum Industry® izay novolavolain'i Artprice tamin'ny 2005 ary nampianariny hatrizay.
Araka ny filazan'i thierry Ehrmann, Izao tontolo izao rehetra'Ireo tranombakoka lehibe dia mitazona kaonty miaraka amin'i Artprice, ao anatin'izany ny Louvre. The Emirà Arabo Mitambatra, miaraka amin'ny renivohiny Abu Dhabi, dia iray amin'ireo firenena 10 mavitrika indrindra miditra amin'ny Artprice's databases…"
Ity ny fifanarahana: ny Paris Louvre dia mivarotra franchise “Louvre” ho Abu Dhabi hatramin'ny 2037. Ity farany dia mandoa totalin'ny 400 tapitrisa euros mankany Paris Louvre hahazoana zony hampiasa ny anarana Louvre. Ity farany izay niaraka tamina tranombakoka frantsay miisa 13, mpandray vola hampindram-bola Abu Dhabi - Tranombakoka 10 sahady nampindrana zavakanto 350 mahery.
Ireo fandaminana ireo dia mampiseho ny fiaraha-miasa amin'ny Museum Industry® ao anaty tamba-jotra, mampiasa fiara fampiasam-bola sy rafitra ara-dalàna sarotra.
Noporofoin'izy ireo tamim-pahatokiana ny fisian'ny taonjato faha-roapolo tamin'ny sehatry ny toekarena vaovao - ny Museum Industry® - tahaka ny nitantaran'i Artprice azy tamin'ny 2005.
Raha fintinina, manana maodelim-pandraharahana mahazatra izahay miaraka amin'ny fidirana (fidiram-bola sy fidiram-bola azo avy amin'ny fidiram-bola) ary ny fivoahana - ny vidin'ny fahazoan-dàlana sy ny vidin'ny fahazoana… amin'ity tranga ity Salvator Mundi, vidin'ny vinavinan'ny Artprice telo volana mialoha ny fivarotana azy.
The 450 tapitrisa dolara Ny fandoavana ny sary hosodoko dia valin'ny fanapahan-kevitry ny fampiasam-bola manan-tsaina mifototra amin'ny fidiram-bolan'ny tranom-bakoka Louvre (ebitda) fa tsy amin'ny fandaniam-bola be. Ireo izay mino fa ity farany dia tsy nahatakatra fa ny Museum Industry® izao no rafitra lehibe indrindra amin'ny tsenan'ny zava-kanto manerantany.
Ity firafitra ity dia mampiakatra ny vidin'ny zava-kanto amin'ny alàlan'ny famoronana tsy fahampiana amin'ny ampahany lehibe amin'ny tsenan'ny Art: Old Masters, Modern Art ary Contemporary Art, ary hitantsika fa ao anatin'ity fikirakirana indostrialy ity, ny famerenana amin'ny laoniny ny "fananana azo tsapain-tanana lehibe" dia mety hanana fiantraikany eo noho eo eo amin'ny fidiram-bola.
Artprice - izay hanangana ny index index ho an'ny tranombakiny (Artmuseum100®) amin'ny fiandohan'ny taona 2018 - manasongadina ny fiovan'ny tranombakoka, izay nitombo folo heny ny mpanjifa tao anatin'ny 30 taona lasa.
Artprice sy ny departemantan'ny ekonometrika azy dia niara-niasa tamin'ny Twitter nandritra ny roa taona tamina santionany goavambe 39 tapitrisa mpanaraka fantatra miaraka amin'ny rohy mankany amin'ny tranombakoka Fine Art 100 lehibe manerantany.
Araka ny filazan'i thierry Ehrmann, Ity fanitarana goavana ny Museum Museum® manerantany dia miara-miasa amin'ny fifaninanana herinaratra mahery vaika eo amin'ny firenena eran-tany, indrindra ny fahefany lehibe (Shina / Etazonia) sy ny fanjakana Golfa. Eny tokoa, ny fifandrafiana amin'ny herin'ny malemy dia mitarika ny tsenan'ny zava-kanto amin'ny valin'ny varotra vaovao mahavariana. Amin'ny fijerinay voarakitra an-tsoratra tsara dia mety hahita valiny manodidina ny tokonam-bolan'ny dolara amin'ny taona 2020 isika.
Amin'ny maha-mpitarika an'izao tontolo izao ny fampahalalana momba ny Art Market, Artprice dia tsy mahazo tombony afa-tsy amin'ity fitomboan'ny Art Market ity, entin'ny herin'ny fampitomboana ny indostrian'ny tranom-bakoka.